Madaxda Maamullada oo kusoo qulqulya Muqdisho [Sabab] | KEYDMEDIA ENGLISH
Madaxda Maamullada oo kusoo qulqulya Muqdisho [Sabab]
Lafta-gareen, ayaa la soo warinayaa inuu la kulmayo cadaadis uga imaanaya beeshiisa oo ku aaddan inuu dhiso Cabdirashiid Xiddig, si beesha Daarood u qaadato kursiga af-hayenka Golaga Shacabka, hayeeshee, arrinkaas uma socdo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynayaasha Maamullada Puntland, Galmudug iyo Koofur galbeed, ayaa ku soo wajahan Caasimadda Soomaliya, Xilli Madaxweynaha Hirshebeelle hore ugu sugnaa magaalada Muqdisho.
Sida ay caddeynayaan xogo hoose, safarka madaxdaan ayaa salka ku haya arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan, Guddoonka Golayaasha Baarlamaanka 11-aad, kuwaas oo la dooran doono ugu danbeyn 27-ka bishaan April.
Siciid Deni, Axmed Qoorqoor iyo Cabdicasiis Lafta-gareen, ayaa maanta soo galaya magaalada, halka Madaxweymaha Jubaland oo Axmed Madoobe, oo ku mashquulsan doorashada Gedo uu isna imaan doono maalmahaan.
Hoggaamiyayaasha Puntland iyo Jubaland, ayaa la rumeysan yahay in ay isku dhari yihiin, Qoorqoor iyo Laftagareen ayaa dhankooda Muqdisho u imaanaya dhisidda Farmaajo, halka Cali Guudlaawe, aysan waxba gacan ugu jirin.
Safaraka Deni, ayaa u muuqda mid uu ku soo macasalaameeyay Puntland, inta ay ka dhaceyso doorashada Madaxweynaha, maadaamada uu musharrax yahay, halka hor-joogayaasha kale, aysan qorshe deggan oo u gaar ah lahayn.
Is-diiwaangelinta musharixiinta Guddoonka Golaha Shacabka, ayaa billaabatay maanta, waxayna soconeysa ilaa 21 April, 2022, halka musharixiinta Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku-xigeennada ay hadal jeedintoodu dhacayso 23 - 24-ka.
25 April, 2022, waxaa loo asteeyay is-diyaarinta Guddiga Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, iyadoo 27 April, 2022, loo qorsheeyay in la qabto Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Doorashada Guddoonka Golaha Aqalka Sare ayaa iyana dhici doonta 26 April, 2022, xilli Is-diiwaangelinta musharixiinta Guddoonka Golaha Aqalka Sare billabaty maanta oo ku began 19 April, taasoo soconeysa ilaa 21 April, 2022.
Dalka ayaa si rasmi ah ugu jaheystay dhameystirka doorashooyinka, kuwaas oo muddo sanad ka badan dib u dhacay, kadib qalalaasho siyaasadeed iyo kala aragti gadisnaan ka dhalatay hannaanka uu waddanka ku maamulayay Madaxweynihii hore Farmaajo.